चिन्तन चौतारी: July 2020
Posted by Chandra Magar at 8:14:00 PM No comments:
हामीले कोरोना विरुद्ध अब चाल्नुपर्ने कदमहरु;
# दक्षिणी सिमालाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरेरै भए पनि अझै कडाइ गर्ने ।
# आरडिटिका साथै पिसिआर टेस्टलाई देशव्यापी रुपमा बदाउदै जाने, सम्भावित खतराका लागि आवश्यक तयारी गर्ने
# कोरोनाको उच्च जोखिम भएका ठाउँमा सिल गरेर टेस्ट गर्ने र कम जोखिम भएका ठाउँहरुमा लकडाउनलाई खुकुलो पारेर सजगता अपनाई नियमित कामकाज जारी राख्ने
# दैनिक ज्यालादारी मजदुर, असक्त, विपन्न र बिरामीहरुलाई जहाँ छन् त्यहीँ उचित खानपिन र बस्न ब्यबस्था गर्ने वा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितीको संयोजनमा सुरक्षित र सतर्कतापूर्वक आफ्नो जिल्ला, पालिका पुर्याई निश्चित अवधी क्वारेन्टाइनमा राख्ने
# शहरबाट गाउँ पसेका श्रमिक र बिदेशबाट स्वदेश फर्केका जनशक्तिलाई व्यावसायिक प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान र सुरक्षित वातावरणको ग्यारेन्टी दिदै कृषि कर्ममा आकर्षित र अभ्यस्त पार्दै जाने
* दक्षिणको खुल्ला सिमाना दीर्घकालीन रुपमै बन्द गरि काँडे तार लगाएर करेन्ट प्रवाहित गरियोस् । नेपाल-ईन्डिया आवतजावत गर्नेलाई अन अराइभल भिसा लागू गरियोस् ।
* राज्यले रेमिट्यान्समा नभई आफ्नो माटो र नागरिकको पौरखमा बिश्वास गरोस् । अब महामारी पश्चात् आउनसक्ने भोकमरीलाई सामना गर्न कृषि उत्पादन बदाउदै आत्मनिर्भर र सबल अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्दै जाने रणनीति अख्तियार गरोस् ।
कोरोना भाइरस मान्छेभित्र बाँच्न चाहन्छ, मान्छेले कोरोनालाई जितेर सुरक्षित रहन ।
मान्छे र कोरोना भाइरस दुबैको लागि यो महामारीको अवस्था हो । यो लडाइँ आआफ्नो अस्तित्वको हो ।
एकाअर्काको सहअस्तित्व स्विकारेपछि चाडै युद्दविराम हुनेछ र दुबै जीवहरु बाँच्ने वातावरण बन्नेछ । त्यसपश्चात् हाम्रो जीवन पुनः सामान्य दंगले अगाडि बद्नेछ ।
सजगतापूर्वक बसौं, धैर्यता राखौं ।
कुनै पनि धर्म केवल साधना होइन, आफैंमा एक कर्तव्य हो । भगवानको भक्तिगान मात्रै होइन, कठिन कर्म पनि हो । सामाजिक अनुशासन, त्याग, समता र मानवता नै धर्मको मुल मर्म हो । धार्मिक सहिष्णुता, एकता र सद्भावना नै पवित्र मार्ग हो । धार्मिक ग्रन्थको अध्यारो पाटो र आफ्नो धार्मिक आस्थाको चस्मा उतारेर धर्मको बैज्ञानिकता र व्यावहारिकतालाई अनुसरण गर्यौ भने मात्रै रोग, भोक र शोकलाई जीवनबाट दूर गर्न सक्छौं । यहीँ नै धर्मको सार र सास्वत सत्य हो । यसैमा सम्पुर्ण मानव जातिको कल्याण छ ।
इस्लाम धर्मावलम्बीहरुलाई रमजानको शुभकामना ।
नेपालको सुखद भविष्यकै लागि थुप्रै रोल्पालीले स्वैच्छिक बलिदान गरे । युद्धकालमा निर्दोष हुदाहुदै पनि रोल्पाली भएकै कारणले जतिबेला पनि मर्न तयार रहनु पदर्थ्यो । अब त अनाहकमा कसैको ज्यान नजाला, देश पनि समृद्ध होला, सबै नागरिक समान दंगले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउलान् भन्ने आशा गर्दागर्दै रोल्पामा फेरि अबोध बच्चाहरुले बिस्फोटमा परि मृत्युदण्ड भोग्नुपरेछ । तत्कालीन बिद्रोही माओवादी पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर स्वयम् पार्टी नै अलप भइसक्यो । तर ती भिरपाखामा अहिलेसम्म पनि बम र बन्दुकहरु बेवारिसे अवस्थामा भेटिनु र पड्केर मान्छेहरु अकालमा मर्न परिरहनु निकै दुःखद् छ । यतिका बर्षसम्म पनि सर्वसाधारणहरु मेलापात जादा एम्बुसमा परिरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी बिद्रोही पार्टी वा राज्य कसले लिने हो ? रोल्पामा रगत कहिलेसम्म बगिरहनु पर्ने हो ? अझै कति छोराछोरीहरुको विभत्स हत्यापछि सिंहदरबारको भोग पुग्ने हो ?
विशेषगरी नेतृत्वलाई मेरो बिन्ती छ, देश र जनताप्रति अलि इमानदार बन । समयको आवश्यकता अनुसार कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर । रोल्पालाई पनि सिंहदरबार र बालुवाटार जत्तिकै माया गर । रोल्पाले उप्रान्त रगत होईन, चोखो बिश्वास र शपथ चाहन्छ ।
मृतक भाइबहिनीहरुमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना ।
देशमा चरम वर्ग विभेद छ भन्ने त सबैलाई थाहै छ । स्वास्थ्य सेवामा पनि वर्गीयता चर्कै गरि हावी छ, त्यो पनि विदितै छ । अहिले त झन् लकडाउन पनि त्यस्तै देखिन्छ । पहुँचवालाहरुलाई निजी गाडीमा जताततै सजिलै घुमघाम गर्न छुट दिइएको छ । आफ्नो चाहना अनुसार खान र पिउन पाएकै छन् । गरीब र ज्यामी मजदुरहरु चाहिँ भोकभोकै झुपडीभित्र कष्टकर समय काट्न बाध्य छन् । जतिसुकै कठिन भए पनि सरकारको आदेसलाई अवज्ञा गर्नुहुन्न भन्ने तिनले राम्रोसँग बुझेका छन् । सरकारले लगाएको नियम हाम्रै सुरक्षाको लागि हो भनेर अनुशासित दंगले मानेका पनि छन् ।
नाकाबन्दीका बेला होस् या बन्दाबन्दीका बेला नै होस्, असर त तल्लो वर्गका नागरिकलाई मात्र परेको देखियो । शक्तिमा हुनेहरू र तिनका वरिपरिकालाई चाहिँ कोरोना संक्रमण नहुने, नसर्ने र अरुलाई नसार्ने जस्तो गरिएको छ । भाइरसले त मान्छे मात्रै चिन्छ, उसको शक्ति र सम्पत्ति हेरेर संक्रमण गर्ने कि नगर्ने भनेर त सोच्दैन होला । रोगको प्रकृति पनि त्यस्तो छैन । मेरो अल्पज्ञानले पनि त्यसो भन्दैन ।
अहिलेसम्म लकडाउनको जति हुर्मत लियौ, लियौ अब चाहिँ गम्भीर रुपले पालना गरौं । सरकारले लकडाउनलाई बढी प्रभावकारी बनाउनतर्फ समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । बिशेष गरि सिमानामा अझै कडाइ र जोखिमपुर्ण क्षेत्रमा व्यापक टेस्ट गर्दै सम्भावित महामारीलाई पराजित गर्न पूर्वतयारी गर्नैपर्छ । सरकार र नागरिक मिलेर महामारीलाई रोक्नका लागि आआफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलौं । कसैले पनि नजरअन्दाज गर्ने भुल नगरौं । अरुका लागि खतरा नबनौं ।
६ मे, २०२०
कार्ल मार्क्स र गौतम बुद्धले अपनाएको बाटो फरक थिए तर उद्देश एउटै थियो - मानवीयता । मार्क्सले वर्गसंघर्ष र मुक्तिको कुरा गरे । बुद्धले अध्यात्म र मोक्षको कुरा गरे । मार्क्सले बाहिरको बाटो रोजे भने बुद्धले भित्रको मार्ग हिडे । संसारमा प्रेम स्वतन्त्र र सर्वत्र छ, हामी आफैं त्यसको सुत्र र स्रोत हौं भन्ने पुष्टि गरे ।
बिश्व शान्तिका लागि हरेक व्यक्तिले भिक्षु बन्नैपर्ने वा अस्त्र बोक्नैपर्ने अपुरो बुझाई त्यागेर मार्क्सको संश्लेषण र बुद्धको ज्ञानलाई अनुसरण गर्दै ब्यबहारिक जीवनमा लागु गर्नसके त्यहीँ नै महान क्रान्ति हो । बिचार, धर्म, स्वतन्त्रता, समानता, सुख, शान्ति, खुशी सबै त्यसैमा अन्तर्निहित रहेको छ ।
जीवनमा तटस्थ भाव नै दु:खको निराकरण हो र अन्तरात्माबाट प्रकट हुने मानवतावादले नै सामाजिक बिद्रोहको आगो निभाउन सक्छ । दुबैको गन्तव्य सभ्य समाज निर्माण र सारमा शान्ति स्थापनार्थ नै थियो ।
यी महामानवहरु प्रति सदैव उच्च सम्मान रहनेछ ।
८ मे, २०२०
यो कलियुग हो । बिश्वास वा धोका परिस्थितिले निर्धारण गर्छ । अशल वा दुष्ट समयले चिनाउछ । सम्बन्धको परिभाषा स्वार्थले खुलाउछ । तसर्थ, कलियुगमा खराब मध्येमा कम खराब चिनेर संगत गर्न सक्नुपर्छ ।
अचेल व्यक्ति होस् वा राष्ट्र, सकुन्जेल कमजोरलाई हेप्ने, थिच्ने, मिच्ने सबैसबै अति गर्छन् नै । स्वाधीन, स्वतन्त्र र शक्तिशाली हुनलाई आफू आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, हरेकले ईमान कमजोर भएको जुग त भोग्नैपर्छ ।
Posted by Chandra Magar at 7:53:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 7:14:00 PM No comments:
हाम्रो नग्नतालाई एक फन्को खास्टोले छोप्नुभन्दा सिलाइएको लुगाले छोप्नु नै उपयुुक्त हुन्छ ।
समाज सुधारक योगमायाहरु अरुण नदिमा हाम्फालेर सामुहिक देह त्याग गर्नु र प्रेमी नवराजहरु भेरीको बहावमा विलीन हुनुमा धेरै समानता र थोरै मात्रै भिन्नता छ ।
राज्यको स्वरुप र मनोविज्ञानले शासन संचालन र सामाजिक चरित्र निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
मानवीयता, वर्गीयता, जातीयता, प्रचण्डपथ, हिंसा-प्रतिहिंसा र रुकुम रोल्पाको सवालहरु अंशअंशमा अन्तर्सम्बन्धित छन् । त्यो बहस र समिक्षा पनि जरुरी छ ।
मान्छेले अर्को मान्छेलाई अमानवीय हर्कत गर्नु जघन्य अपराध त हुँदै हो, यस्तो गम्भीर अपराधलाई दाकछोप गर्न खोज्नेहरु पनि अपराधी नै हुन् । कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दोषी जति सबैलाई हदैसम्मको सजाय हुनैपर्छ ।
फेरि पनि भन्छु, हाम्रो नाङ्गो जीउलाई सधैंभरी एक सरो खास्टोले छोपेर मात्रै उपती लाग्दैन, लुगा सिलाएरै दाक्नुपर्छ । सामाजिक न्याय र समानताको अभ्यास अपरिहार्य भइसक्यो । समयमै होश खोलौं । अन्यथा, एकाइसौं शताब्दीमा भएर पनि यस्तै बर्बर र क्रुर नरसंहारहरु दोहोरी नै रहनेछन् ।
Posted by Chandra Magar at 7:07:00 PM No comments:
माननीय प्रभाकर ज्यू, रुकुमको जनप्रतिनिधि भएको नाताले आफ्नो क्षेत्रमा भएको दुःखद् घटना सम्बन्धि सदनबाट जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी दिन खोज्नु अत्यन्तै जायज हो । तर दलितको कारणले घटना भएको, लकडाउन टोडेको, वडा अध्यक्षले प्रहरी बोलाए, युवाहरू भेरी नदीमा हाम्फाले भन्ने जस्ता झूटो कुरा चाहिँ तपाईंलाई कसले सुनायो ? एक प्रष्ट वक्ताले सदनमै कसरी यस्तो आधारहीन कुराहरु बोल्नुभयो ?
तपाईं आगामी निर्वाचनमा वडा अध्यक्षको प्रत्यासी होईन । जनताको नजरमा तपाईं एक कुशल कमाण्डर, सफल उर्जामन्त्रीका साथै आशा गरिएका थोरै युवा नेता मध्येमा गनिनु हुन्छ । जनताले त तपाईंलाई भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा देख्न चाहेका छन् । राज्यलाई नै चुनौती दिदै अन्यायका विरुद्ध बन्दुक पड्काउन आँट गर्नेले अहिले आएर पीडितहरुको आलो घाउमा नुनचुक छर्किने दुस्साहस कसरी गर्नुभयो ? यस्तो विभत्सपूर्ण हत्याकाण्डमा जवान छोरा गुमाउने आमाहरुका आँसुप्रति कसरी यति निर्मम बन्न सक्नुभयो ? युद्ध लड्नेहरु सबै हिंस्रक भएर होईन बरु कोमल हृदय भएर अत्याचार सहन नसकी प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य पारिइएका पनि हुन सक्छन् भन्ने मेरो अल्प बुझाई थियो तर त्यो बुझाईलाई गलत सावित गर्दै तपाईं किन मानवीयतालाई भुलेर समवेदनाहीन बन्दै हुनुहुन्छ ? तपाईंकै पार्टीका दुई चार कार्यकर्ता सजायको भागिदार बन्न सक्लान् तर तपाईंले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । तपाईंको सकारात्मक भूमिकाले अपराधीहरु उम्किन पाउने छैनन् । तपाईंले अभिभावकको रूपमा पनि कसैगरी न्यायलाई मर्न दिनुहुन्न जुन तपाईंको कर्तव्य पनि हो ।
देशभरमा तपाईंको लाखौं शुभेच्छुक छन् । दुनियाँले घटनालाई मात्रै होईन कि तपाईंलाई पनि नियाली रहेका छन् । यहाँ न्यायले जितेको खण्डमा तपाईंले समेत अझै केही लाख समर्थकको मन जित्न सक्नुहुनेछ । यस घटनापश्चात् पनि एउटा दृढ़, जुझारु र आशालाग्दो युवा नेताको छवि कायमै राख्नुहुने विश्वास छ । यदी न्यायप्रेमी जनताको आशा र विश्वासमा ठेस लाउनुभयो भने त्यो तपाईंकै राजनैतिक पाइलामा ठेस लगाए सरह बन्नेछ र इतिहासले तपाईंलाई एक कलंकित पात्रको रूपमा चित्रण गरिरहनेछ ।
कृपया, भेरी नदीमा आफैं हाम्फाले भन्नेहरुको कुरामा भन्दा यहीँ एउटा फोटोमा बढी भर गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
२७ मे, २०२०
Posted by Chandra Magar at 7:00:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 6:52:00 PM No comments:
Posted by Chandra Magar at 6:40:00 PM No comments:
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा गरेको गठबन्धन अन्ततः पार्टी एकतासम्म पुगेकोछ । राजनैतिक तरलताले आजित जनताहरुले स्थिर सरकारको पक्षमा खुलेरै भोट दिए पनि । करीब दुई तिहाई जनमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले अब राष्ट्रिय हितमा धमाधम काम गर्ने अपेक्षा थियो । तर यथार्थमा भने त्यसो हुन सकेको छैन ।
दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपामा नेताहरुको सम्बन्ध घरी सुमधुर हुने र घरी चिसिने क्रममा अहिले फेरि आन्तरिक कलहले उत्कर्ष रुप लिदैछ । एकता अगावै अधिकांशले नेकपाभित्रको सम्भावित आन्तरिक शक्ति सन्तुलन सम्बन्धि गरेको अनुमान अहिले आएर मेल खाएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपि ओली पार्टीभित्रका हरेक कमिटीमा अल्पमतमा परेका छन् । मुख्यतः उनको आफ्नै शैली र स्वभावकै कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । सरकारमाथी अहिले तित्राको मुखै बैरी भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ ।
नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई थुप्रै जनपक्षीय काम गर्नसक्ने ठुलो अवसर जुरेको थियो । ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो एकल सरकार, कमजोर प्रतिपक्षी, मधेसी दलको साथ र जनताको अपार समर्थनले गर्दा बाताबरण अत्यन्तै अनुकुल हुदाहुदै पनि जनसरोकारको सवालमा शुरुदेखी नै चुक्दै जादा जनतामा असन्तोष र आशंका बद्दै गएर बिस्तारै गुनासो र बिरोध हुन थाल्नु स्वभाविक थियो । सरकारले जनताको समस्यालाई बुझेर सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा उल्टै विभिन्न आक्षेप लाउने, बिल्ला भिराउने, अपत्यारिलो गफ हाँक्ने गर्नाले सकारात्मक आलोचना गर्ने तप्कालाई आक्रोशित पार्दै लग्यो । बेला कुबेलाका असान्दर्भिक चुट्किला र टुक्काहरुले पनि मनोरञ्जन दिनुको सट्टा बरु तितोपिरो पार्दै गयो । समयक्रममा आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यो असन्तुष्टि चुलिदै गएर अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको हो । पार्टीभित्र छलफल र सामुहिक निर्णय गर्दै सोही अनुसार अगाडि बदेको भए यो अवस्था नआउन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले प्रधानमन्त्री अहिले भित्र र बाहिर सबैतिरबाट आक्रमणको तारो बन्न पुगेका छन् जुन निश्चित थियो ।
बिश्व नै कोरोना महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको बेला नेपाल अछुतो रहने सम्भावना थिएन । कोरोनासँग जुध्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत आवश्यक पूर्वतयारी खासै केही गरिएको थिएन । जब संक्रमण देखिन थाल्यो तुरुन्तै देशभर लकडाउन गरियो, जुनबेला कुर्सी हल्लिरहेको संयोग पनि परेको थियो । जनताहरु केही दिन धैर्यतापूर्वक बसे तर संक्रमितहरु बद्न थाले । लकडाउन चाडै खुल्ने सम्भावना थिएन, यता दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्नेहरु ठुलो समस्यामा परे । कोहि बच्चा बोकेरै चैत बैशाखको चर्को घाममा अत्यन्तै कष्टकर यात्राका वावजुद भोकभोकै हिडेरै आफ्नो थातथलो फर्किन बाध्य हुनथाले । सबैले देखेका त्यत्रो हुलका हुल मान्छेलाई नदेख्ने सरकारले उनीहरुको पिडा सुन्ने र बुझ्ने सामर्थ्य राख्ने कुरै थिएन । लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिनुपर्ने र जनजीवन सहज पार्न कोसिस गर्नुपर्नेमा सरकार भने अचानक पार्टी फोर्ने अध्यादेश जारी गर्ने, बन्दाबन्दीमै सांसद र पूर्व आइजिपीलाई तराईतिर झारेर अर्को पार्टीको सांसद उठाएर ल्याउन निर्देशन दिने, बालुवाटारबाट बीचबीचमा फोन गर्दै आश्वासन बाँड्ने, निवासमै भोजभतेर र सांगीतिक कार्यक्रममा झुम्ने, सिमानामा आएकालाई सुरक्षित तरिकाले प्रवेश गराउन अनिच्छा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिरह्यो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता, प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरु अनुचित आर्थिक कारोबारमा संलग्नता, जताततै भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिरहदा प्रम भने कानुनी रूपमा छानबिन गर्नतिर लाग्नुभन्दा बचाउ गर्दै पारदर्शीताको आवाज उठाउनेलाई तीखो कटाक्ष गर्न थाल्दा उनको बोली निरस र फिक्का सुनिदै गयो । सरकारको बेमौसमी योजनाहरु एक पछि अर्को असफल हुँदै जानु र अलोकपृय गतिविधिहरुमाथी प्रश्न उठ्न थालेसँगै नैतिक रूपमा गिर्दै गएको सरकार आफ्नै कारण पार्टीभित्रै संख्यामा पनि कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण नेकपाको जनमत घट्न थालेको अनुमान लाउन सकिन्छ ।
वाइडबडी काण्डमा जनताले प्रश्न उठाउदा स्पष्ट पार्नुभन्दा कुनै छानबिन नगरिकन मन्त्रीलाई निर्दोष करार गर्ने, सुन काण्डमा ब्यापारीसँग मिलिमतो गरेर अनुसन्धान प्रतिबेदन नै सामसुम पार्ने, गोकुल फोन काण्डमा पैसा बुझेको प्रमाण खोज्ने, ओम्नि र यतिसँग रातारात सेटिङ मिलाउने तर संसद र पार्टी बैठकमा आफुले नाम नै नसुनेको, थाहै नपाएको, विधि सम्मत निर्णय गरिएको, मन्त्री संलग्न नरहेको अन्तसन्त कुरा गर्दै हिड्ने गर्नाले समस्या झन् बल्झिदै गयो । रुकुममा भएको सामुहिक नरसंहार, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन, क्वारेन्टाइनमै बलात्कार, झाडापखालाकै कारण उपचार नपाई छट्पटिदै प्राण त्यागेका, सिमाना र सडकमा भोकै मरेका जनताका बारे बेखबर रहे झैं केही शब्द बोल्न आवश्यक नठान्ने जस्ता शैलीले नागरिक चिदिदै जानुका साथै आफ्नो सरकार छ भन्ने कतै पनि महसुस गर्नै सकेनन् । तर प्रधानमन्त्री संसदको रोष्ट्रममा बसिबसि विवादित एमसिसीको पक्षमा कुर्लिने, बेसार बारे धारा प्रवाह प्रवचन दिने, सरकारको गुणगान गाउने, राष्ट्रपतिको भरमग्दुर बचाउ र विपक्षीलाई ओठे जवाफ फर्काएर मक्ख पर्ने मात्रै नभएर सरकारले बलात्कार गरेको हो र? यसोउसो गर्न सिकाएको हो र? मारेको हो र? भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदै सरकार सफल भएको जबर्जस्ती मान्दिनैपर्ने, नमान्ने जतिलाई गणतन्त्र बिरोधी, कसैबाट परिचालित हुल र उच्छृङ्खलको उपमा भिराइदिनमै ध्यान केन्द्रित गरिरह्यो । यसले आउने दिनका बारे राम्रो संकेत गरिरहेको थिएन ।
लकडाउनको बेला ड्युटीबाट फर्किरहेका स्वास्थ्यकर्मी र औषधी किन्न निस्किएका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले लठ्ठी बर्साउने र लात हान्ने, डायलाइसिस गर्नैपर्ने बिरामीलाई समेत बाहिर निस्किनै नदिने, गरीबहरुले भोकै मर्न थाल्यौं भन्दा राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा बाँचे भोलीपर्सी नि खान पाइन्छ भनेर भित्रै थुनेर राख्ने तर सरकारका मान्छेहरु भने तराई पहाड मनपरि डुलिरहने, तन्नेरीका हुललाई कहिले वकिल कार्यालय त कहिले प्रहरी कार्यालयतिर गएर नारा लाउन आदेस दिने कामहरु जायज थिएनन् । राष्ट्रपति चाहिँ खुल्ला सडकमा अगाडि पछाडी दायाँबायाँ सेना प्रहरीको ताँती लगाएर राजसी ठाँटमा साइरन बजाउदै संसद भवन सवार हुने अनि भुइँ टेक्नै नमिल्ने झै गरेर सेनाद्वारा रातो कार्पेट विछ्याउनै पर्ने, शितल निवासमा करोडौंको गलैँचा र साजसज्जा, मन्त्री क्वाटरमा जिमखाना जस्ता गतिविधि देख्दा धेरैलाई फ्रान्सका सम्राट न्युरोकै याद दिलाइरह्यो । राष्ट्रपति एउटा ब्यक्ति मात्रै होईन, सम्मानित संस्था हो । संवैधानिक संस्थाहरु पंगु हुँदै जानुको अर्थ शरीरको अंगहरु क्रमशः फेलियरतिर गएर मान्छेको मृत्यु हुनु जस्तै हो । त्यतातिर गम्भीर भएर समयमै होश पुर्याउन जरुरी छ ।
भारतले हाम्रो भुभाग समेत राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि सरकारलाई जनताले हाम्रो देशको नक्सा पनि तुरुन्तै जारी गर्न ६/७ महिनादेखि निरन्तर दबाब दिइरहे तर प्रधानमन्त्रीले नक्सा त जत्ती पनि छाप्न सकिन्छ नि भन्ने हलुको टिप्पणी गर्ने, जग्गा नै फिर्ता ल्याउने हो भनेर टारिरहने, नीति तथा कार्यक्रममा समेत नक्साको बिषय नराख्ने तर सचिवालयले राख्नैपर्ने अडान लिएपछि बल्लतल्ल अन्तिम समयमा समेटिएको कुरालाई चाहिँ आफुले गरेको भन्दै एक्लै जस लिनखोज्ने आत्मकेन्द्रित र ब्यक्तिवादी सोचलाई विवेकशील कसैले पनि अशल मान्न नसक्ला । कम्युनिष्ट पार्टीमा त झनै ब्यक्तिभन्दा पार्टी प्रधान हुन्छ । भलै यसको श्रेय जनताले प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएका छन् र इतिहासले पनि उनैलाई दिइरहनेछ ।
केपी ओलीको आफ्नै विशिष्ट गुण र वैगुणहरु छन् । परिस्थितिको अनुकुलता र प्रतिकुलतालाई आकलन गरेर बोल्ने उनको स्वभाव देखिन्छ । बरु त्यहीँ कुरा त्यहीँ दिन अर्को ठाउँमा गएर ठ्याक्कै उल्टो कोणबाट पनि बोल्दिन धक मान्दैनन् । तर यसपाली एकरुपता देखाएका छन् । आफ्नै नेतालाई भारतीय एजेन्ट करार गर्ने र व्यबहार पनि सोही अनुसार गर्ने । सकेसम्म पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने, बैठक राख्दै नराख्ने, पार्टीका बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय नमान्ने अर्थात नसुन्ने, थकाउने, गलाउने र आफुले चाहेकै जसरी सम्झौता गराउने । त्यसो हुन नसके पार्टी नै फुटाउने । त्यहीँ रणनीति अन्तर्गत स्थायी कमिटीको बैठकलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् । आफ्नै सरकारी निवासमा चलिरहेको पार्टी बैठकमा उपस्थित नहुने, नेताहरूको कुरा सुन्न चासो नदिने तर विपक्षी दल, अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशलाई रातिराति बोलाएर भेट्ने, लकडाउन लागू नहुने गरि केही युवाहरुलाई अरुको लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको माइतीघर मण्डलामा समर्थनमा नारावाजी गर्न लगाउने, अहिलेको पार्टी फोरेर पूर्वपार्टी चलाउने मनसायले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पठाउने क्रियाकलापहरु निर्धक्क भएर गरिरहेका छन् ।
संसद अधिबेशन अन्त्यको निर्णय गर्न समेत सभामुखसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन् । आफ्नै पार्टीमा छलफल त के जानकारी नै दिएनन् । प्रतिपक्षीले त झन् कुनै सुइँको नै पाएनन् । बिहान पार्टीको अर्का अध्यक्षसँग संसद चालू राख्ने सहमति अनि प्रतिपक्षीलाई राति संसदमा मिलेर एमसिसी टेबल गर्न आग्रह गर्ने तर हठात अर्को दिन मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्रीहरू आइनपुग्दै संसदलाई रत्यौली खेल्ने थलो नबनाउने भन्दै अध्यादेशको दोका खुल्लै राख्न संसद अन्त्यको निर्णय गर्न हिच्किचाएनन् । अध्यादेश ल्याउन, फिर्ता गर्न र संसद अधिबेशन अन्त्यको निर्णय जति हतारमा भएको थियो, त्यत्तिकै तेज गतिमा राष्ट्रपतिको अनुमोदन पनि भएकोछ । यसो हुनुमा एउटै मात्र कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नियमित भेटघाट र सहकार्यको प्रतिफल हो । बालुवाटारले सकेसम्म आफैले गुट भेला गर्ने, फकाउने, लोभ्याउने, धम्क्याउने र नसके शितल निवास रिफर गर्ने कार्य नाजायज र खेद्जनक छ । यसरी राष्ट्रकै उच्च र सम्मानित पदको गरिमा र मर्यादा कायम रहिरहन्छ भन्ने ठान्नु आपत्तिजनक छ ।
मानौं, यतिबेला सरकारमा अरु नै कोही रहेका हुँदा हुन् त प्रधानमन्त्रीले कति जोडतोडले छिर्केमिर्के कटाक्ष गरिरहेका हुँदा हुन् ? पार्टीमा उनी विपक्षमा रहेको भए उनी संयमित हुँदै वार्ता गरिरहेका हुन्थे होलान् ? सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा उनको बहुमत हुदो हो त अहिलेसम्म के कस्ता निर्णय गरिसकेका हुन्थे होलान् ? अहिले पार्टी गणित त्यस्तो छैन तसर्थ अनुमान मात्रै लाउन सकिन्छ । आफुलाई जबजको उत्तराधिकारी ठान्ने तर जवजकै आधारभूत मान्यतालाई व्यबहारमा नमान्ने अराजक, अलोकतान्त्रिक, अहंकारी, स्वेच्छाचारी र ब्यक्तिवादी सोचाइले देश, पार्टी, विचार र स्वयम् आफैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपालमा संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा थिए । लगत्तै केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । नाकाबन्दीको मुकाबिला देशभक्त जनताले डटेर गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने कुटनैतिक पहल गरेर स्थितिलाई सामान्य बनाउन तत्परता देखाउनुभन्दा कुर्सीमा बिराजमान भएर मधेसी र पहाडी भनेर उत्तेजना फैलाउन उद्दत थिए । मधेसमा गोलीले युवाहरू दल्दै गर्दा रुखबाट पाकेका एकदुई आँप झर्नु नौलो कुरा नभएको बताउथे । ईन्डियासँग चाइना कार्ड प्रयोग गर्थे तर व्यबहारमा भने कुनै औपचारिक प्रक्रिया थालेनन् । फलस्वरूप देशमा जातीय दंगाको खतरा बदिरहेको थियो भने दुबै छिमेकी मुलुकसँगको परराष्ट्र सम्बन्ध छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्दै थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित थिए । आफ्नै पार्टी नेताहरूले पहल गरेको र साक्षी बसेको सत्ता साझेदारी दलसँगको आलोपालो लिखित सम्झौतालाई पनि नेताहरुको आग्रहका वावजुद अस्वीकार गरिदिए । परिणामस्वरूप संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अघिल्लो पटकको उनको कार्यकाल टुङ्गिएको थियो । नेकपाभित्रको आन्तरिक मामिला छिट्टै साम्य नहुने हो भने पुनः त्यस्तै पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखिदैछ । नेकपाका नेता कार्यकर्ताले प्रस्तुत गर्ने उदारता र संयमताले नै नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
सुर्य अब पश्चिमबाट उदाउछ, नेपाललाई वार्षिक सवा अर्ब फाइदा आउछ, महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हितमा छ भन्दै सन्धि गरेर संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रमुख भूमिका खेल्नेहरु नै पुनः एमसिसी सम्झौता मार्फत मुलुक समृद्ध बनाउने जिद्दी गर्नु, सित्तैमा त्यत्रो पैसा आइरहेको भनेर र्याल चुहाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने पिरले सार्वभौम र स्वाधीनताको ख्याल नगरी जसरी नि पास गर्न तम्सिनु कुनै अनौठो भएन, आश्चर्य त जब यिनै मान्छेहरु संसद र सडकमा खुंखार देशभक्त र खाटी राष्ट्रवादी कहलिन्छन् । यिनकै समर्थनमा सडकमा होहल्ला गर्दै केही थान जवानहरु प्रदर्शनमा कुर्लिन्छन् । सरकार गठन भएदेखि नै जनताप्रति उत्तरदायी बन्न जाँगर नदेखाएकै कारण मुख्य जिम्मेवारीबाट सरकार चुक्दै गयो । देश बिदेशमा रहेका नेपालीले देशलाई आर्थिक र बौद्धिक सहयोग गर्न जुटिरहदा सरकार भने एकपछी अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा फसिरह्यो । महामारी संकटमा समेत स्वास्थ्य सामाग्रीमा कमिसनको खेल खेल्छ, विपत्तिमा उद्द्वार गर्नुपर्ने नागरिकमाथि व्यापार गर्छ । जसको कारण केही मन्त्रीले गरेका राम्रा कामहरू पनि ओझेलमा परिरहे । समग्र मूल्याकंन गर्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएकै हो ।
कोरोना महामारी पश्चात् देशमा बेरोजगारी र भोकमरीले विकराल समस्याको रुप लिने निश्चित छ । गरीबहरु बादीमा बग्ने, पहिरोले पुरिने, घरबारविहीन हुने र शीत लहरले मृत्युु हुने जस्ता सधैंको समस्या दोहोरिने नै छ । हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिको समस्या दोहोरिइरहदा पनि रोकथाम, नियन्त्रण र क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना बनाउन सकेका छैनौं । अबको तहसनहस अर्थतन्त्र उकास्न, जनताका समस्या हल गर्न, छिमेकीसँग बिग्रदो कुटनैतिक सम्बन्ध सुधार्न, कोरोना बिरुद्ध लड्न, अनिकालको सामना गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कुनै स्पष्ट र ठोस योजना नै बनेको छैन । सरकार बेकारमा तथ्यहिन कुरालाई प्रमाणित गर्नमै सकेजति शक्ति खर्चिरहेको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारको औचित्य लगभग सकियो । अबको कठिन परिस्थितिलाई सम्हालेर नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने ब्यक्तिको आगमन नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
सक्षम र योग्य कमान्डरलाई चिन्ने लडाइँको मैदानमै हो । तसर्थ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिन्ने उपयुक्त समय यहि नै थियो । अध्यक्षबाट हटाउने नहटाउने उनको पार्टी नेकपाको नितान्त आन्तरिक बिषय हो । सांगठनिक विधी नमान्ने र अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि हुनसक्छ । विधि र प्रक्रियाको वकालत गर्ने तर विधि लागू गर्न हिम्मत नगर्नेहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कुनै ब्यक्तिकै कारण संस्थाले क्षति व्यहोर्नुपर्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । नेकपा फुट्ला भन्ने चिन्ताले देशलाई भड्खालोमा हाल्ने र जनताहरु सती जानुपर्ने कुरामा कदापी सहमत हुन सकिन्न ।
आम जनताले देशको निम्ति कसैले इमान्दारीपूर्वक जादु गरोस् भन्ने चाहेका छन् । त्यो सम्भावना त छैन तै पनि जनताले खोजेको बेला सरकार भएको अनुभुति हुनुपर्छ । नेतृत्वको अग्निपरिक्षा संकटको घडिमै हुने हो । यथास्थितिमा रुमल्लिएर बेथितिलाई मौलाउनु दिनुभन्दा नयाँ विकल्प खोजिनु पर्छ । केपी बसेको कुर्सीमा अर्को कोहि ब्यक्ति आउने बित्तिकै चमत्कार हुने होईन तै पनि बीसको उन्नाइस पो हुन्छ कि भन्ने आशा गर्नुपर्छ । अर्को आउनेले पनि सुशासन दिन नसकेको खण्डमा फेरि अर्को उत्तम विकल्पको खोजी गरिनैपर्छ । जबसम्म साच्चिकैको सहि नेतृत्व भेटिदैन तबसम्म अनेक विकल्पमा जानैपर्छ । यदी निस्वार्थ नेतृत्व चयनमा लाग्यौ भने स्वभाविक रुपले एकदिन स्थायी वा स्थिर सरकार या सजिलैसँग फेरबदल नहुने जनताको सरकार पक्कै पाउनेछौं । अहिले तुरुन्तै चाहेर मात्रै त्यो सम्भव छैन तर आम जनताले सचेत दंगबाट व्यवस्था र नेताको खोजी भने निरन्तर जारी राखिरहनु पदर्छ ।
Posted by Chandra Magar at 12:17:00 PM No comments: